mairie-antananarivo – Sarotiny amin’ny fahasalamam-bahoaka ny kaominina
Sarotiny amin’ny fahasalamam-bahoaka ny kaominina
administrateur 30 martsa 2018 Commentaires fermés
Tsy azo atao ny manjono sy manarato eny amin’ny farihin’anosy.
Misy mpanarato sy mpaka trondro eny amin’ny farihin’Anosy. Tonga nanala ireo arato izay nisy nametraka manodidina ny farihin’Anosy ny ekipan’ny Boriboritany Voalohany, ny Polisy Monisipaly ary ny Mpamonjy Voina ny Alatsinainy 26 Martsa 2018. Arato mirefy 300 metatra mahery ary vovo sy fintana maromaro no tratra teny an-toerana nandritra izany.
Raha tsiahivina dia rano maloto avy any amin’ireo hopitaly lehibe sy ireo lakan-drano madinika avy any amin’ireo fokontany manodidina no mivarina eny amin’ity farihy ity, azo lazaina izany fa tsy azo antoka sy tsy ara-pahasalamana ary mety hiteraka fanapoizinana ho an’ireo mpihinana trondro ny fanjonoana eo.
Araka izany dia entitra sy sarotiny ny Kaominina Antananarivo Renivohitra amin’ny fanaraha-maso ny fahasalaman’ireo vahoaka ka izay indrindra no nanaovana izao fandraisana andraikitra izao.
Miantso ny mponina izay manam-baovao sy mahita olona maka trondro eny amin’ny farihin’Anosy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra mba hampandre ireo tompon’andraikitra raha vantany vao mahita tranga hafahafa eny amin’ity farihy ity. Izao no natao dia ny mba ho fisorohana ny fiparitahan’ireto trondro tsy azo antoka ireto.
Tsy mijanona hatreo ny fanaraha-maso ity farihy ity fa mbola hitohy ary hentitra ny tananan’Antananarivo raha toa ka mbola miverina ny tranga toy izao.